UBarack noMichelle Obama Thenga iKhaya leMidiliya laseMartha laseKhaya - Indumasi
Eyona Indumasi UBarack noMichelle Obama bahlawulelwe nje i-11.75 yezigidi zeedola kwikhaya likaMartha laseVineyard
UBarack noMichelle Obama bahlawulelwe nje i-11.75 yezigidi zeedola kwikhaya likaMartha laseVineyard
UBarack noMichelle Obama ngoku ngabanini bamakhaya baseMartha.Ifoto nguScott Olson / Getty Izithombe
I-Obamas inokubhiyozela ukuyenza. Emva kweminyaka yamahemuhemu malunga nowayesakuba ngumongameli kunye nenenekazi lokuqala beqokelela indawo yokuhlala isigxina kwiVineyard kaMartha, u-Barack kunye noMichelle Obama bagqibela ngokuvalwa kwindawo entle, eneehektare ezingama-29.
Intsapho yokuqala eyayisele iqhelile sele ineendawo zokuhlambela ezisixhenxe, i-8.5-igumbi lokuhlambela elingaselunxwemeni, njengoko beliyiqeshile ehlotyeni elidlulileyo. Bangene escrow ehlotyeni , ngoku ka TMZ , Kwaye ngoku bayigqibile intengiso. Bafumene isaphulelo esibalulekileyo ukusuka kwizigidi ezili-14.85 zeedola umnini weBoston Celtics uWyc Grousbeck okokugqibela wayenekhaya kwintengiso, njengoko ixabiso lokugqibela lokuthengisa liza kwi- $ 11.75 yezigidi. Kukuba okukhulu nangakumbi xa kuthathelwa ingqalelo iGrousbeck ekuqaleni yayinepropathi edweliswe kwi-22.5 yezigidi zeedola ngo-2015.
BONA KWAKHO: INkosana uHarry kunye noMeghan babhiyozela umbulelo kunye nosapho olusondeleyo eMelika
Ikhaya leholide elitsha elenzelwe i-Obamas linobubanzi obuziinyawo ezingama-6,892. Igumbi lokuhlala lineesilingi, imiqadi yentsimbi evulekileyo kunye nendawo enkulu yamatye, ngelixa igumbi lokutyela elisemthethweni lijikelezwe ziindonga zeefestile.
Ikhitshi ifakwe iikhabhathi ezimhlophe kunye neetafile, isiqithi esenziwe ngentsimbi engenazingci kunye nendawo yesidlo sakusasa. Kukwakho amaphiko eendwendwe amabini apheleleyo.
I-master suite ikhutshelwe ngaphandle ngendawo yokubasa umlilo, igumbi lokuhlambela eligutyungelwe ngemabhile kunye nendawo yalo yangasese yangasese. Ngaphandle, kukho ichibi kunye ne-spa, eneefestile ezininzi ezivaliweyo kunye nezogqunywe, indawo yokubasa umlilo ngaphandle kunye ne-boathouse. Mhlawumbi umphathi-ntloko owayesakuba lixesha uya kuthatha inxaxheba kwimidlalo yakhe ayithandayo yamanzi kweli hlobo lizayo. Yintsapho yakho nje ekhwele ibhayisekile.URick Friedman-Pool / Getty Izithombe
U-Barack kunye noMichelle Obama bebesekhefini kwisidiliya sikaMartha kunye neentombi zabo, uSasha noMalia, iminyaka, kubandakanya ixesha lowayesakuba ngumongameli kwiNdlu eNtshonalanga, xa usapho lonke lwaluza kuthatha ikhefu leeveki ezimbini eChilmark, inezithombe ezininzi kubandakanya imifanekiso esiyithandayo yebhayisekile. Kweli hlobo liphelileyo, bachitha ixesha elithile eYurophu, njengoko bona ibaleke yaya emazantsi eFrance Ukuphumla kosapho eProvence, ngaphambi kokuba uBarack noMichelle Obama bawelele kwiLake Como iholide yomhla ophindwe kabini kunye noGeorge noAmal Clooney ukuze baphile ubomi babo beholide.
I-Obamas ibisendlwini ukususela oko yaphuma e-White House-igcina i-8.1 yezigidi zeedola kwindawo yase-Kalorama, kwaye ngelixa bekhethe ukungathengi indawo yokuhlala eNew York (ubuncinci okwangoku), ' Kuxelwe ngokucinga ngokufumana ikhaya elikwiNtshona yoNxweme.
Ngaba Uziva Unoxinzelelo? Ingqondo eNtsha enxibekayo Yenzelwe ukuthoba umoya kunye nokuphucula ukulala
Kutheni iBlue Apron Stock inyuke nge-100% phakathi kwesifo esiTshabalalisa iMarike
Ukuleqa uMzuzu we-'Aha ': Ukunyuka kwePuzzle yeMeta
UChris Matthews uvumela ukunyeliswa kweBigoted ukuya ku-Unchallenged kwi-'Hardball '
ellie okokugqibela kuthi icandelo 2
zingaphi goli gummies ngosuku
izitabane kunye nabathandanayo abathandanayo
iinxalenye ezintathu zobuqhetseba bomlingo
ubiza nini uSaul ngcono ngo-2019